देउवा एक्ल्याउने कसरत तीव्र, कसको पकड कति? « AayoMail
देउवा एक्ल्याउने कसरत तीव्र, कसको पकड कति?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको आगामी फागुन ७ देखि १० सम्मका लागि घोषणा गरिएको १४औं महाधिवेशनका अन्य अत्यावश्कीय तयारीमा ढिलाइ भइरहे पनि भावी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा भने आकांक्षा र जोडघटाउ सुरु भएको छ।
महाधिवेशनका लागि तय भएको तालिकाको पछिल्लो परिमार्जनअनुसार पनि साउन अन्तिमसम्ममा क्रियाशील सदस्यताको विषयसमेत अलपत्र रहेको छ। तर, भावी नेतृत्वका लागि भने आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ।
नेताहरूले विभिन्न पदमा उमेदवारी घोषणा गर्ने गरी घोषणाबिनै विभिन्न तालमेलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्ने आधार बनाउन थालिसकेका छन्।
खासगरी १३औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले नै पार्टीका निर्णय, संगठन र कार्यक्रमलाई महाविधेशन केन्द्रित गर्दै आफू बलियो हुने दिशामा अगाडि बढेपछि देउवाइतर पक्षमाथि पनि दबाब बढ्दै गएको छ।
महाधिवेशन तयारीलाई बढाउनभन्दा देउवाको ध्यान आगामी महाधिवेशनका लागि शक्तिआर्जनका उद्देश्यबाट प्रेरित देखिएको संस्थापनइतर पक्षको बुझाइ छ।
यसबीच धमाधम विभाग गठन, हालै राप्रपा नेता सुनिल थापालाई कांग्रेस भित्र्याउने निर्णयदेखि यअसघि कांग्रेसबाट बाहिरिएर छुट्टै पार्टी बनाएका विभिन्न समूह-बिपी (कांग्रेस) लाई समेत एकीकरणमा ल्याउने प्रयासमा देउवा लागेका छन्।
त्यसैगरी, देउवाइतर विशेषगरी १३औं महाधिवेशनमा पौडेल र सिटौला समूहमा रहेका नेता पनि सभापतिमा देउवालाई दोहोरिन नदिने एकमात्रै विकल्प रहेको र बाँकी सबै नेता एक ठाउँमा उभिनुपर्ने भन्ने निष्कर्षसाथ छलफलमा जुटेका छन्।
लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध नभएका नेतासमेत अहिले मौनता तोडेर एक ठाउँमा उभिने प्रयासमा छन्। उनीहरूबीच विभिन्न चरणमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय भेटघाट बढ्दै गएको छ। केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले वरिष्ठ नेतासँगै युवाहरू पनि पार्टीको भावी नीति र नेतृत्वलाई लिएर छलफलमै रहेको बताए।
‘अहिले प्रजातन्त्र कम्युनिस्टहरूको हातमा पुगेको छ, कांगे्रसको टाउकोमा दुईतिहाइको पहाड छ। त्यो अवस्थामामा कांग्रेस, देश र जनतालाई पुर्याउनेहरूको भूमिका, समीक्षासहित बिदाइ हुन्छ,’ घिमिरेले भने।
विशेषरी अघिल्लो अधिवेशनमा पौडेलको छाताभित्र अटेका नेताहरू सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला, रामशरण महतदेखि देउवाकै समूहबाट महामन्त्रीमा पराजित अर्जुननरसिंह केसी, छुट्टै समूह बनाएर सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरेका नेता कृष्ण सिटौला र सिटौला समूहसँग जोडिएर महामन्त्रीका प्रतिस्पर्धी गगन थापासमेत योपटकको प्रमुख नेतृत्वको जोडघटाउको ‘सिन’ मा बलियोगरी देखिएका छन्।
देउवाइतर समूहको पकड बलियो पार्ने अभियानको अग्रसरता १३औं महाधिवेशनमा देउवाकै महामन्त्रीका उम्मेदवार बनेर पराजित बनेका अर्जुननरसिंह केसीले लिएका छन्।
‘उहाँले नुवाकोटकै राजनीतिमा राम्रो सम्बन्ध नभएका रामशरण महतदेखि शेखर, सशांक, प्रकाशमान, सिटौलासमेत भेटेर एकैठाउँमा ल्याउने, छलफल गराउने गरिरहनुभएको छ’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने।
केसीले यसबीचमा कांग्रेस रूपान्तरणकै लागि भन्दै आफूलगायत ७० काटेका नेताहरूले विश्राम लिनुपर्ने भन्दै यस्तै नेता सभापति हुने अवस्थामा आफू पनि आकांक्षी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य केसीले पार्टीमा चाहिएको सुधार चाहानेहरू नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुँदै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने अवश्यकता रहेको औल्याए । उनले तिनिहरूमध्ये जो लड्दा पनि एक जना लड्नुपने सोच रहेको र त्यसमध्येको एक दावेदार आफू पनि भएको बताए ।
‘हैन भने सहमतिमा एक जना लडौं भन्नेमा मेरो निरन्तर प्रयात्न छ,’ उनले भने। केसीले यथास्थितिबाट पार्टी नचल्ने भन्दै अहिलेको छलफलबाट उत्शाही भएको समेत बताए। ‘सबै जना संरक्षकको रुपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा बसौं र अहिलेका प्रभावकारी युवकहरुलाई अगाडी बढाऔं,’ उनले भने ।
यो समूहले आगामी महाधिवेशनमा देउवाविरुद्ध एक हुने अभ्यासको सुरुवात पार्टीको भ्रातृ संगठनमध्ये ट्रेड युनियन र डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनको निर्वाचनमा देखाइसकेको छ। जसमा देउवाबाहेका नेता एक ठाउँमा उभिएर ती संगठनका संस्थापनको उपस्थिति न्यून बनाइदिएका थिए।
चार वर्षे कार्यकालमा पार्टीलाई कमजोर बनाएको आरोप, गत निर्वाचनमा भएको पार्टीको पराजय र प्रतिपक्षको भूमिकामा समेत कमजोर ‘पर्फर्मेन्स’ का कारण देउवा अलोकप्रिय भएको बुझाइ पौडेल पक्षीय नेताहरूको छ।
आगामी महाधिवेशनमा देउवालाई उक्त समूहबाट टक्कर दिने तहमा कोही छैनन्। वर्तमान उपसभापति विमलेन्द्र निधी देउवालाई रिझाएर वा पराजयको त्रास देखाउँदै गलाएर उक्त समूहबाट सभापतिको उम्मेदवार बन्ने योजनामा छन्।
निधीले पनि देउवालाई समेत ‘सधैं तपाईंको साथ नदिन सक्छु’ भन्ने सन्देश दिने तहमा पौडेल समूहका केही नेतासँगको भेटघाटलाई बढाएका छन् भने पार्टीको अन्तरिक राजनीतिमा समेत कतिपय निर्णयमा देउवासँग असहमति देखाउन सुरु गरेका छन्।
पछिल्लोपटक नेपालको नयाँ नक्सा र नागरिकता विधेयक सन्दर्भमा निधीले देउवालाई तर्साउने रणनीति प्रयोग गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।
देउवाइतर पक्षको सन्दर्भमा भने सर्वस्वीकार्य नेतृत्वको खोजी र आकांक्षीको व्यवस्थापन सबैभन्दा जटिल छ। धेरै नेता भएकै कारण उत्पन्न हुने व्यवस्थापन कठिनाइलाई महामन्त्री वा अन्य पदाधिकारीमा व्यवस्थापन गरेर पौडेल पक्षलाई एक हुनबाट रोक्न सके सभापति दोहोरिन कठिन नहुने देउवाको बुझाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य घिमिरे पुराना नेताहरूले नयाँ नेतृत्व चयन सन्दर्भमा नेताहरूको कार्यशैली आफूलाई केन्द्रमा राख्ने हुन नौलो नभए पनि त्यसरी नचल्ने बताए।
‘यसपटक नेतृत्व चयन हुँदा नेताहरूले पाएका अवसर, त्यतिबेलाका कार्यसम्पादन, त्यसले पार्टी र देशलाई पुर्‍याएको फाइदाको पनि समीक्षा गरेर मात्रै नेतृत्व चयन हुन्छ,’ उनले भने।
कुन मोडलमा केन्द्रित छ छलफल?
‘१४औं महाधिवेशनमा एक भएर लड्न नसके देउवा नै दोहोरिने र उनको निरन्तरतामा पार्टीको हालत योभन्दा पनि कमजोर हुन्छ,’ भन्ने साझा बुझाइले मात्रै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूलाई सामूहिक प्रयासको तहमा ल्याइपुर्‍याएको छ।
उद्देश्य र बुझाइमा एकरूपता भए पनि नेताहरूले विकल्पका प्रस्ताव ल्याउँदा आफूलाई केन्द्रमा राखेकै कारण आगामी नेतृत्वको सन्दर्भमा बन्न सक्ने प्यानलको स्पष्ट आकार आएको छैन।
देउवा वा देउवा समूहले उभ्याउने उम्मेदवारका सन्दर्भमा अन्तिम अवस्थामा सहमति बन्ने सम्भावना रामचन्द्र पौडेल वा पौडेलकै व्यवस्थापनमा केन्द्रित देखिएको छ।
पौडेलका ठाउँमा आफूलाई उभ्याउन चाहने नेताहरूले पौडेलको साथलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। विभिन्न छलफलमा सहभागी एक नेताका अनुसार अहिले विशेषगरी तीन मोडलमा छलफल भएका छन्।
पहिलो मोडलमा रामचन्द्र पौडेललाई नै एकपटकका लागि पार्टी नेतृत्वको अवसर दिएर, त्यसमा अन्य समूह वा व्यक्तिको व्यवस्थापनको सोच अगाडि सारिएको छ। जसमा नेताहरूले शेखर कोइराला र गगन थापा दुवैलाई महामन्त्रीको उम्मेदवारको राख्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
कांगेसका पुराना नेता पुरञ्जन आचार्यले एक छलफल कार्यक्रममा यो गठबन्धनले ‘फायल बढुवा (पौडेल), छाताधारी (शेखर) र युवा आकर्षण (थापा) तीनवटै तप्कालाई समेट्ने टिप्पणी गरेका थिए।
दोस्रो प्रस्तावका रूपमा भने बलियो पार्टीसहित निर्वाचनमा जाँदा बहुमत आउने र पार्टीसहित सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा समेत नेताहरूको व्यवस्थापन विषय चर्चामा छन्।
जसमा शेखर कोइरालालाई सभापति, पौडेललाई राष्ट्रपति, सिंहलाई संसदीय दलको नेता (भावी प्रधानमन्त्री), गगन थापा र रामशरण महतलाई महामन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ। जसमा सिटौला, शेखरलाई उपसभापतिको रुपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव छ।
तेस्रो प्रस्ताव सोचेभन्दा फरक ढंगमा समेत छलफलमा आएको छ। जसमा निधि सभापति बनाएर प्रकाशमान उपसभापति र सशांक उपसभापति, रामशरण र गगन महामन्त्री बनाउने प्रस्ताव छ। जसमा पौडेललाई राष्ट्रपति र सिटौलालाई संसदीय दलका नेताका रूपमा व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव पनि छलफलमा आएको छ।
केन्द्रीय सदस्य घिमिरेले अब कांग्रेसले पञ्चायतकालदेखि पार्टी र सरकार चलाएका नेताहरूको बिदाइ चाहेको भन्दै दोस्रो पुस्तासँग सम्झौताको ठाउँ बाँकी रहेको बताए। ‘दोस्रो पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पनि युवाहरूको उल्लेखनीय र महत्वपूर्ण सहभागितासहित सम्झौता हुनसक्छ,’ उनले भने।
कस्तो छ नेताको पकड?
कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पछिल्लो समय कार्यकर्तामाझ पकडका आधारमा देउवा, रामचन्द्र र सशांकपछि केही पात्र निर्णायक मानिन्छन्।
तीबाहेक देउवा पक्षबाट उनीपछि विशेषगरी तराईको पार्टी ‘भोट बैंक’ मा निधीको प्रभाव धेरै महत्वपूर्ण छ। देउवाले पनि निर्वाचनमा जितका लागि निधिलाई इन्ट्याक्ट राख्नैपर्ने बाध्यता छ। देउवा समूहमा देउवापछि बालकृष्ण खाँडको प्रभाव बलियो रहेको नेताहरू बताउँछन्।
पौडेल समूहमा भने बिपीपुत्र सशांक, गणेशमान सिंहको विरासत र काठमाडौंको संगठनका आधारमा प्रकाशमान बलिया मानिन्छन्।
महामन्त्रीका रूपमा सशांकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र त्यहीबीचमा कोइराला परिवारको विरासतमा सार्वजनिक मञ्चहरूमा सभापतिलाई ठाडो चुनौती दिएका कारण पनि शेखरको यसबीचमा स्पेस बनाएको बुझाइ कांगेसभित्र छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा तेस्रो धार र विशेषगरी देउवालाई सभापति बनाउँ निर्णायक बनेको सिटौला समूहको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय छ। यो समूहबाट महामन्त्री पराजित भएका युवा नेता गगन यसपटक आगामी नेतृत्वको सबै जोडघटाउमा छुटेका छैनन्।
‘सभापतिका अधिकांश आकांक्षीले गगनलाई आफ्नो महामन्त्रीको प्रस्ताव गरेर छलफल गरिरहेका छन्,’ थापानिटक एक युवा नेताले भने, ‘उहाँको ध्यान पार्टी र मुलुकलाई नै रूपान्तरण गर्ने सोचमा आधारित भएरै नेतृत्वको योजना बन्नुपर्छ भन्नेमा छ।’
पकड बढाउँदै देउवा
उनीविरुद्ध असन्तुष्टहरू एक ठाउँमा आउने महाधिवेशमा कमजोर हुनसक्ने विषयलाई ध्यानमा राखेर देउवा पार्टीका आन्तरिक संरचनाका नियुक्ति र निर्णयलाई समेत आफूअनुकूल प्रयोगमा उत्रिएका छन्।
बाहिर र पार्टीकै अर्को समूहको नजरमा अलोकप्रिय भए पनि देउवाले गुटको संरक्षण र विस्तार भने झन् बलियो बनाएका छन्।
निर्वाचनको समयमा विजयकुमार गच्छदारसँगको एकीकरण, पछिल्लो समय राप्रपाका नेतालाई भित्र्याउने निर्णयसँगै देउवाले आफ्ना गुटको भने रक्षा गरेको र पार्टीभित्रको राजनीतिमा स्थान अझै मजबुत बनाएका छन्।
महाधिवेशनको छेकोमा सुनिल थापालाई पार्टी प्रवेश गराउँदा एकपटकका लागि बिनाप्रतिस्पर्धा निश्चित संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने सहमतिसमेत गरिसकेका छन्। गच्छदार समूहबाट आएकाहरूको स्थान त्यसैगरी सुरक्षित भइसकेको छ। यी निर्णयले सबैभन्दा बढी फाइदा देउवाले नै उठाउनेछन्।
केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले ‘सभापति देउवा सभापति नभई आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको’ बताए।